$ 90 bhiriyoni anodhura subs: Subway inoseka chiFrench submarine dambudziko
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » $ 90 bhiriyoni anodhura subs: Subway inoseka chiFrench submarine dambudziko
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
Mune trolling masterpiece, Subway inotora kuchera pamutengo wakabviswa weAustralia yepasi pegungwa dhiri neFrance, Canberra isati yatsigira ichida kuwana submarines-inofambiswa nesimba kubva kuUnited States.
Australia yakanzura chibvumirano cheS $ 90-bhiriyoni yema-submarine dhiri neFrance mukuda chimwe chibvumirano neUSA.
France yakayeuka nhume dzayo kubva kuAustralia nekuUS nemusi weChishanu vachipindura zvayakatsanangura se "hunhu husingagamuchirike pakati pevabatsiri nevadikani".
Subway inozvirova dundundu kuti yaive ne "non-nuclear powered" subs iyo yaive "$ 90 bhiriyoni yakachipa".
Nekutsvinyira zvine utsinye chibvumirano chengarava yepasi pegungwa cheFrance neAustralia chakakanganisika, Subway cheni yekudya yakakurumidza yakaburitsa kushambadzira kwekuseka kwemasangweji ayo, ichizvirova dundundu kuti ine "non-nuclear powered" subs iyo yaive "$ 90 billion isingadhuri".
Sarudzo yeAustralia yekudzima iyo AUS $ 90-bhiriyoni yemahombekombe egungwa neFrance yakapa kuzara-peji Subway kushambadzira kwakaburitswa mupepanhau reThe Age nhasi, kutora kuchera pamutengo wakadzivirirwa wepaAustralia yepasi pegungwa dhiri neFrance, Canberra isati yatsigira ichida kuwana ngarava dzinofamba nenyukireya dzinobva kuUnited States.
Kunyangwe vazhinji vashandisi vezvemagariro evanhu vakaona kushambadza kuve kwehungwaru nekuseka, vamwe vakaona ichi "sembura" uye kusaremekedza.
Mumwe mushandisi akatopomerwa SubwayChiziviso che "kupandukira" che "kushandisa [pfungwa] yekufa kwevanhu kutengesa chikafu," tichifunga nezvekuti Hondo China, Australia, neUS zvinoita kunge zviri pedyo sei.
France yakayeuka mumiriri wayos kubva kuAustralia nekuUS nemusi weChishanu vachipindura zvayakatsanangura se "hunhu husingagamuchirike pakati pevakabatana nevamwe" nekuda kwechibvumirano cheAUKUS (Australia, United Kingdom, United States).
Mutungamiri weFrance Emmanuel Macron anonzi akangoziviswa nezvechisarudzo cheAustralia chekubuda muchibvumirano chepasi pegungwa chemarudzi maviri '2016 nguva pfupi nhau dzisati dzava pachena.
Jean-Yves Le Drian, gurukota rinoona nezvekunze kuFrance, akati sarudzo iyi "kubaya kumusana, ”Achiyambira kuti" mhedzisiro yacho inokanganisa kubata chaiko kwemibatanidzwa yedu, kudyidzana kwedu uye kukosha kweIndo-Pacific yeEurope. "
Australia yakaruramisa kubviswa kwayo kubva muchibvumirano neFrance nekutaura kuti mutengo waive wakakwira kupfuura zvaifungidzirwa pakutanga.